Pneumonia bụ onye obi tara mmiri, ịhụnanya bụ mmetụta ịhụnanya-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ọrịa na-adịghị obi ọjọọ, ịhụnanya na-ahụ n'anya
Ememe Mmiri nke afọ a abụghị otu. Enweghị obi ụtọ nke Ememme Oge opupu kwesịrị inwe, ọ gbakwunyere esemokwu.
Kewapụ nje ahụ, ewepụghị ịhụnanya
Enwere ezi ịhụnanya n'elu ụwa, anyị na-a attentiona ntị na ọganihu nke ọrịa ahụ site na mgbasa ozi mpụga kwa ụbọchị, dị ka a ga-asị na e nwere eri na-emetụta onye ọ bụla n'ime anyị mgbe niile. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịga Wuhan, anyị ka nọ na Wuhan.
Ndị ọrụ si n'ọkwa niile nke ndụ n'ihu ọnọdụ nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ n'obodo: ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, nna, nne, ndị di, nwunye… Mana mgbe ọdachi bịara, ha nwere naanị otu ọrụ ha niile: ichebe ndụ Site. Ihe niile
ha nwere ike ghara ịraru ụra ọtụtụ ụbọchị n'usoro, ọ hụbeghị ndị ezinụlọ ha ruo ọkara ọnwa. Ha na-atụ ụjọ na ndị òtù ezinụlọ ha agaghị akpọ ọbụna na ekwentị n'ihi na ha na-echegbu onwe ha; ọbụna nwata
ndị kwesịrị ịbanye n'alụmdi na nwunye ahụ n'ihi na ọnọdụ mberede nke ọrịa ahụ siri ike ịkwụsị agbamakwụkwọ ahụ a na-eche ogologo oge wee tinye aka na agha a na-agbachi nkịtị "ntiwapụ". Site na telivishọn, Intanet na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ, ha hụrụ na ha na-agba ọsọ megide ọnwụ ahụ, na iji merie ọrịa ahụ, ha ekwenyeghị na nje ọnwụ. Dị ka ụmụ amaala, anyị nwere nkụda mmụọ karịa. N'agbanyeghị etu afọ si dị mma, ọ bụ naanị na mmadụ na-aga n'ihu maka anyị.
Amaghị m mgbe agha a ga-akwụsị, ma ya fọdụzie etu ọ ga-esi kwụsị, mana agha egbe a na-agbachi nkịtị nke egbe ga-eme ka ndị niile bi n ’obodo dị n’otu. M na-echebu na ọ dị jụụ n'okporo ámá ahụ dị jụụ, mana m ga-atụ anya na okporo ụzọ ndị okporo ụzọ na-eju na igwe mmadụ na-eme mkpọtụ ga-adị n'udo. Haze ga-emecha gbasaa ma chi bọọ ga-emesịa.
Mgbe anwụrụ ọkụ gafere, ọ ga-abụ mgbe mmiri ifuru okooko osisi.
Na 2020, ihe ọma ka na-aga, ọ dịghị atụ anya izu oke. Ma obi ụtọ agaghị adị, na ntiwapụ ahụ ga-alaghachi ozugbo enwere ike.
Previous: Oslọ ọgwụ Huoshenshan: Ọsọ ndị China na-agba ọsọ megide ọnwụ
Ọzọ: Mee atụmatụ tupu ị kwụsie ike